आठ भारतीय प्र'हरीको ह'त्या गर्ने विकास दुबे को हुन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
आठ भारतीय प्र’हरीको ह’त्या गर्ने विकास दुबे को हुन् ?
उत्तर प्रदेशको कानपुर क्षेत्रलाई आधार बनाएका कुख्यात अपराधी विकास दुबेलाई पक्राउ गर्न बिहीबार राति बिठुर थाना क्षेत्र गएको प्रहरीमाथि आक्रमण भयो । सडकमा जेसीबी राखेर बाटो छेकी घरका छतबाट प्रहरीमाथि गोली हानिएको थियो ।
उनले प्रहरी थानाभित्रै गएर सन् २००१ म राज्यमन्त्री सरहको पदमा रहेका श्रम सम्झौता बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष शुक्लाको हत्या गरे । दुबेले गरेको यो अहिलेसम्मको ‘हाइ प्रोफइल’ हत्या हो ।
शुक्ला बीजेपी नेता थिए ।यस मुद्दामा दुबे पक्राउ परेका थिए । तर, यति ठूलो घटनामा पनि प्रहरीले अदालतमा दुबेविरुद्ध कोही साक्षी दिएन । त्यहीकारण अदालतदे उनलाई सफाइ दियो ।
(भारतीय संचार माध्यमहरुको सहयोगमा- हिमालखबर